Pad backup & accessories
Vovoka maina maimaim-poana amin'ny vovoka
Tube malefaka ho an'ny sanding block
Coaxial Dust Collector Soft Tube Ho an'ny Sander
Kitapo fanangonana vovoka
Fanangonana famoahana loko
Xieyanshi Abrasives Niara-niasa tamin'ny Comac!
Miarahaba anao amin'ity fiaraha-miasa ity. Taorian'ny fifampiraharahana sy fanaraha-maso nandritra ny fotoana ela, Shanghai Xieyanshi Abrasives dia nandalo ny COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China Ltd) farany nandinika sy nanamarina, lasa iray amin'ireo mpanohana azo antoka ...
Ny maha-zava-dehibe ny dingana amin'ny fandefasana hazo
Ny fomba fitotoana dia misy ny fitotoana maina, ny fikosohan-drano, ny fikosohan-diloilo, ny fitotoana savoka ary ny poleta nify. Ny fitotoana maina dia azo zaraina amin'ny fikosoham-bolo, fikosoham-bary ary fikosehana tsara. Ny fikolokoloana henjana dia matetika ampiasaina hanesorana volon'ondry hazo, holatra, marika lakaoly ary p ...
Dingana tokony hametrahana ilay talantalana mora ampiasaina Xys Dust Free Mobile Dry Grinder
Dingana 1 antsipiriany momba ny faritra iva: (fahasamihafana kely ho an'ny faritra samihafa) dingana 2 ...
Inona avy ireo fanasokajiana lehibe ny abrasives?
Abrasive Abrasives dia anarana ankapobeny an'ny abrasives sy abrasives, ao anatin'izany ny vokatra abrasive sy ny vokatra Bai Abrasives. Abrasive Abrasives dia fantatra amin'ny anarana hoe nify indostrialy. Amin'ny fitaovana fikosoham-bary, abrasive na abrasive dia matetika ampiasaina ho fitaovana fikorisana amin'ny faritra masinina hihaona amin'ny fangatahana teknika sasany ...